Kaararka My Blogging ayaa yimid! | Martech Zone
Kaararka My Blogging ayaa yimid!
Talaado, September 18, 2007 Jimco, Janaayo 6, 2017 Douglas Karr
Markaan dhammeeyo ka hadalka shirarka, badiyaa waxaa la i weydiiyaa kaarka ganacsiga dad aad u tiro yar. Kaarka ganacsiga? Wixii blogger ah? Aniga oo 3 shirar ah soo soconayaan bilaha soo socda, waxaan go aansaday in aan quudiyo oo aan runtii helo kaararka ganacsiga qaarkood! Ma hubo inta ganacsi ee laga yaabo inaan lumiyay ka dib markii qof ka baxay oo aanan xasuusan qofka aan ahaa.
Kaararka ayaa yimid maanta waxaanan u maleynayaa inay u muuqdaan kuwo aad u fiican:
Kaararka waxaa sameeyay VistaPrint, kani waa marki 5aad ama 6aad ee aan ganacsi la sameeyo. Waxay bixiyaan kaararka ganacsiga caadiga ah ee bilaashka ah oo wata nashqadaha caadiga ah - ama dhammaan waad bixi kartaa. Waxaan doortay inaan naqshadeeyo naftayda dusha sare ee muuqaalka asalka ah ee ay hayaan. Waxaan helay dhalaal dhalaal ah iyo gadaal madow iyo caddaan. Hal talo oo qaabeyn ah… adoo adeegsanaya tifaftiraha khadka tooska ah, waxaad lakab ka dhigi kartaa mid kale. On my blog blog iyo URL, Waxaan u isticmaalaa far cad oo ka weyn font madow si ay ula soo baxaan asalka buluuga ah.
Maraakiibta, waxay igu socodsiisay ilaa $ 50 500 kaararka. Uma maleynayo inay taasi aad u xun tahay gabi ahaanba! Iyaga ayaa iska bixin doona qofka ugu horreeya ee i xusuusta. 🙂
Mar baan Aabbahay waxoogaa kaadhadh ah u sameeyay oo ay eray ku dul jareen. Mar dhow lama xiriirin VistaPrint, waxay dejiyeen qorshe cusub oo lagu saxay aabbahay. Aad ayaan ula dhacsanahay shaqadooda.
Hubso inaad igu qabato meesha Shirka Profs B2B Suuqgeynta imanaya Chicago! Waxaan ku jiri doonaa guddiga qoraalka. Istaag oo waan hubi doonaa inaan ku siiyo kaarkayga.
Tags: kaararka wax lagu qorokaararka ganacsigakaararkadouglas karrBlog Tech Suuqblog tiknoolajiyadda suuqgeyntasawir -gacmeed
Waan ku daalayaa FPAM
Sep 18, 2007 at 11: 45 PM
Nabad Doug. Waxaan arkaa inaad sidoo kale casriyaysay boodhkaaga iyo astaantaada. Waxay umuuqataa mid fiican. Sidee ku sameysay
Way fiicantahay in la maqlo adiga oo mashquul ku ah qabashada waxa shirka ka socda. Kama aanan hadlin fagaarayaasha 10 sano waxaanan dareemayaa xoogaa cabsi ah oo ku saabsan Blog World. Wax talo bixin ah?
Sep 19, 2007 at 6: 44 AM
Thanks mahadsanid: banner. Waxaan ku sameeyay adoo adeegsanaya Adobe Illustrator iyo Photoshop. Photoshop oo ku yaal madaxa, Sawir qaadaha qoraalka. Waxaan ku mashquulsanaa labada codsiba dhowr sano hadda, waxaa jira qalooca barashada oo quruxsan (runtii kuma fiicni Photoshop gabi ahaanba!). Haddii aad go'aansato inaad raacdo wadadaas, isha ku hay sanduuqa sanduuqa - waxaa jira talooyin aad u fiican, bilaash iyo casharro halkaas ka jira.
Waxyaabaha shirku waa wax aniga igu kiciya walwal iyo xamaasad labadaba. Waxaan u maleynayaa inay u fududahay bloggers tan iyo markii aan 'ku celcelinno' inaan maalin walba ka hadalno goobta. Furaha hadal kasta oo dadweyne waa ogaanshaha maaddadaada - iyo sidee buu u yaqaanaa blog ka fiican blogger?!
Inaad si raaxo leh ugu hadashid waxay la timaaddaa waqti. Ka fikir jawaab kasta ka hor intaadan bilaabin hadalka - taasi wax xoogaa ayay caawineysaa. Mararka qaarkood waxaan ku celceliyaa su'aasha qof walba taasna waxay i siisaa waqti aan fikir isugu soo ururiyo. Waxaan ogaadey in aan hadaaqayo oo aan qasanaayo haddii aan isku dayo inaan isla markiiba xabada ka toogto.
Nasiib wanaagsan! Tani waa waxyaabo xiiso leh!
Sep 19, 2007 at 2: 14 AM
Kaararka ayaa u muuqda kuwo aad u fiican! Nasiib wacan shirkaaga.
Jul 31, 2008 markay tahay 2:25 PM
Oh maya! Waxaa jira jaakad oo markale xir! '-p
(Naqshad wanagsan in kastoo! 🙂